Ivenkile yeeFonti: iifonti ezifanelekileyo ezingama-20 kwiiprojekthi zakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ivenkile yeeFonti: iifonti ezifanelekileyo ezingama-20 kwiiprojekthi zakho
UJose Angel | | Imithombo, Izibonelelo
Zonke iifonti zomntu ngamnye kuthi, eziyikhompyuter yethu, zihlala zimbalwa. Zininzi iiprojekthi ezahlukeneyo ezifuna izifundo ezahlukeneyo. Phakathi kwazo, ezona zibalaseleyo ziifonti. Ubungakanani, iimilo kunye nemibala. Kodwa ezona zenza umbono wethu weprojekthi zibe nzima kakhulu zezi.
Olu luhlu lulandelayo lweefonti esizibonelelayo kwi-Intanethi kwi-Intanethi lolunye lwezona zikhetho zibalaseleyo esizifumeneyo. Zonke zisimahla, ubuncinci, xa kubhalwa eli nqaku. Njengoko kunokuhlala kusenzeka, emva kwethutyana, ezinye zazo ziyasuswa. Okanye banokuya kwindlela yokukhuphela ngokuhlawula. Njengoko ndihlala ndikhusela, ukuhlawulela umsebenzi owenziwe kakuhle akufuneki kube yingxaki xa ufuna ukubuyela kubo.
1 Imigca yeSerif
1.4 Isicatshulwa esibomvu
2 Kubhalwe ngesandla
2.3 Izithunzi zokuKhanya
3 Iifonti zebrashi
4 Iifonti zetattoo
4.1 Iifonti zeBetty
5 Iifonti ezingaqhelekanga
5.2 Iifonti zikaElixia
5.3 Ivenkile enkulu
I-Lora yifonti yasimahla eneengcambu zayo kwi-calligraphy. Yayenzelwe kwasekuqaleni uhlobo lweCyreal ngo-2011, kunye nokongezwa kweCyrillic kongezwa ngo-2013, kwaye iza ngeendlela ezine: Rhoqo, iBold, i-Italic kunye neBold Italic.
Uphefumlelwe nguDala Floda kunye nosapho lakwaBodoni, uButler yifonti yasimahla eyilwe nguFabian De Smet. Injongo yakhe yayikukuzisa ubuncinci bezi mini kwiifonti ze-serif ngokusebenza kumagophe eefonti zeserif zakudala.
I-Arvo lusapho lweefonti zejometri ze-slab-serif ezilungele ukusetyenziswa kwescreen kunye nokuprinta. Yenzelwe ukufundeka, yenziwe ngu-Anton Koovit kwaye yapapashwa kulawulo lwefonti kuGoogle njengomthombo ovulekileyo wasimahla (OFL)
Nalu usapho lweefonti zasimahla ezenziwe ngokukodwa kwimveliso yencwadi, iphefumlelwe ngohlobo oludala lukaGaramond. Umbhalo weCrimson ngumsebenzi owazalelwa eJamani, owazalelwa eJamani uSebastian Kosch, othi wayephenjelelwe ngumsebenzi kaJan Tschichold, uRobert Slimbach, noJonathan Hoefler.
Le fonti yokubhala yesibindi yaphefumlelwa yimilo yoonobumba oblique efumaneka kwisicatshulwa esiqhelekileyo seTamal. IKavivanar yenzelwe nguTharique Azeez, umyili wohlobo olusekwe eSri Lankan, kwaye ukhululekile ukukhuphela.
I-Amatic yifonti encinci yewebhu, yokugubungela incwadi, ilungelele izihloko okanye ukuhamba okufutshane kwesicatshulwa. Ifumene ukuthandwa kwayo ngobuhle bayo obunobunkunkqele, obugqabhuka ngobuntu. Ifonti yasimahla yayiqale yenziwa nguVernon Adams, ngaphambi kokuba ihlaziywe kwaye iphononongwe nguBen Nathan kunye noThomas Jockin. Okwangoku, inemisebenzi kwiiwebhusayithi ezingaphezulu kwe-2,400,000.
Umsebenzi wobugcisa ngohlobo loyilo uKimberly Geswein. Ilungele ukongeza isichukumisi sakho kwiiprojekthi zakho, le fonti yasimahla inemiphetho ejikeleziweyo kunye ne-crisp, abalinganiswa abacocekileyo. Okwangoku ifumaneka ngendlela enye kuphela, kodwa sele ingqineke ithandwa kakhulu.
I-Punk emnandi ibonelela ngokuqaqambileyo, ulutsha, kunye nokuthatha ngokupheleleyo okwangoku kwifonti yokubhala ngesandla. Ukufakela isitayile ngesitayile, phantse ukuziva kwejiyometri, le fonti yasimahla ngumsebenzi kaFlou, umyili kunye nombonisi waseBratislava, eSlovakia.
Uluhlu lokudlala luyifonti ezotywe ngesandla kunye nezitayile zebrashi ezomileyo eziza kwiindidi ezintathu: iSkripthi, oonobumba, kunye nomhombiso. Ilungele uyilo olubonisiweyo, kubandakanya iiposta, i-t-shirts, kunye nezinye iimveliso.
USophie ulula, unobungane, kwaye akanamakhonkco kancinci, ngendlela emnandi. Ichazwe njenge "ibrashi ebhalwe ngesandla enebhonasi emnandi yokuhombisa," usapho lubandakanya ii-glyphs zeelwimi ezininzi kunye nokudityaniswa konobumba wasekhohlo nasekunene.
Ukungakhathali yifonti ebrashiweyo ebhalwe ngesandla ebandakanya oonobumba abakhulu kunye noonobumba abongezelelweyo baseLatin. Njengoko kubonisiwe apha ngasentla, iyakusebenza kakuhle kuyilo lwesiphumo se-watercolor, nokuba kungokuprintwa okanye kwiwebhu.
I-Kust yifonti ebhalwe ngesandla, ebhalwe ngoonobumba abakhulu, enembonakalo egqwethekileyo neyonakeleyo.
UBetty yenye yeefonti zasimahla zetattoo ezazisusela kwixesha elidlulileyo, xa yonke 'indoda yokwenyani' yayineankile yomatiloshe kwaye 'ndiyamthanda uMama' babenee-biceps zabo.
Le fonti yeskripthi itsalela kumoya wecalligraphy ukwenza into epholileyo kwaye intle kakhulu. Le fonti yasimahla ingumsebenzi womyili waseSweden uMåns Grebäck.
Enye ifonti ye-calligraphic egqibeleleyo yokwenza umvambo we-tattoo, iServal sisilo esibi nesirhabaxa yoyilo. Ifonti yasimahla ngumsebenzi ophefumlelweyo kaMaelle.K noThomas Boucherie.
UMAMA yifonti ekhuthazwe ngumvambo wesikolo esidala ngokwesiko laseMelika, kunye nokunikezela ngegcisa kubugcisa bexesha elidlulileyo. Ifonti yasimahla yingqondo kaRafa Miguel, umlawuli wezobugcisa ozinze eSanto Domingo, kwiRiphabhlikhi yaseDominican.
Uhlobo lokuchwetheza lwaseFransi kunye noyilo lwegraphic uEmmeran Richard wenza ifonti ye-futuristic-Anurati ngelixa wayephuhlisa iwebhusayithi yakhe. URichard wenza ifonti ngenjongo yokuyinika simahla kubo bobabini kunye nokusetyenziselwa ukuthengisa ebantwini, kwaye ukuze abanye bakwazi ukuyenza ngokwezifiso iimfuno zabo.
Ngokusekwe kwigridi enamacala amathandathu, i-Elixia luhlobo lokuchwetheza olunencinana egxininisa ngokuthe nkqo. Yenziwe ngumculi kunye nomyili uKimmy Lee ngo-2005, kwaye ibandakanya oonobumba abakhulu, oonobumba abancinci, amanani, abalinganiswa aboluliweyo, ii-accents, kunye nezinye iindlela.
UGilbert Baker, owasweleka ngo-2017, wayengumgqugquzeli we-LGBTQ kunye nomculi owaziwa kakhulu ngokwenza iflegi yomnyama, kwaye ukhunjulwe ngalo mfanekiso wesikrini simahla. Eyilwe ngezihloko ze-banner kunye neziqubulo engqondweni, uGilbert uyafumaneka njengefonti esemgangathweni yevektha, kunye nefonti enemibala kwifomathi ye-OpenType-SVG kunye nohlobo oluhlekisayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Ivenkile yeeFonti: iifonti ezifanelekileyo ezingama-20 kwiiprojekthi zakho
Ukufota nefuthe le-multicolor kwi-Photoshop
Isiphumo esiphambili kwiFotohop ngokukhawuleza